ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ – Page 54 – Pwintsan
သွေးတိုးနှင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါအတွက် ဒန့်သလွန်အစေ့ခြောက်အစွမ်း
သွေးတိုးနှင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါအတွက် ဒန့်သလွန်အစေ့ခြောက်အစွမ်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး (၁) ဒန့်သလွန် ရွက် ဟင်းချိုချက်သောက်ခြင်း၊ကြော်စားခြင်းဖြင့်အစာကြေစေသည်။သွေးတိုးအမူးရောဂါသက်သာစေသည်။ (၂) […]
အောင်မဲညိုပွင့် ရေနွေးဖျောသောက်ခြင်းရဲ့ အံ့ဖွယ်များ
အောင်မဲညို အပွင့် ၂ ပွင့်၊ ၃ ပွင့် ကို ပန်းကန်ထဲ ထည့်၍ ရေနွေးဖျောလိုက်ပြီး၊ […]
နှာခေါင်းအမြဲတမ်းပိတ်ပြီး အသက်ရှူကျပ်နေလျှင် ကြက်ဟင်းခါးရွက်
ဒီမနက်ခင်းတော့ နှာခေါင်းအမြဲတမ်းပိတ်နေပြီး အမြဲလိုလို အသက်ရှူရခက်ခဲလို့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆေးထိုး ၊ ဆေးစား ၊ ဆေးသောက် […]
ခြေစွယ်ငုတ်ခြင်းက ခံရခက်ပြီး ကုသလို့ အမြစ်မပြတ်ပဲ ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေဆို မျက်ရည်ကျသည်ထိ လှီးဖြတ်ပြစ်ကြပြီး ဆီချက်ပူ လောင်းထည့်တာမျိုးလည်း […]
ရုတ်တရက် ၀မ်းအလွန်လျှောလျှင်၊ ကလေးဖြစ်စေ၊လူကြီးဖြစ်စေ ၀မ်းမရပ်မနားသွားပါလျှင်
၀မ်းအလွန်လျှောလျှင် ကလေးဖြစ်စေ၊လူကြီးဖြစ်စေရုတ်တစ်ရက် ၀မ်းမရပ်မနားသွားပါလျှင် ဘာလုပ်ရမည်မသိဖြစ်တတ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် တောရပ်နေပြည် သူတို့ကြုံတတ်ကြလေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါလျှင် ဆူးပွတ်နေသောရေနွေးတစ်ခွက်ထဲသို့ လက်ဖက်ခြောက်လှော်ပြီးသား […]
အင်ဥ ချက်စားခြင်း အကျိုးနှင့် တွဲမစားသင့်သော အစားစာများ အင်ဥဟာ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ များစွာပါဝင်ပါတယ်။ […]
အာရုံကြောအားနည်းခြင်းအတွက်မြန်မာဆေးနည်းကောင်းလေးတခု ပျားရည်စစ်စစ်နဲ့သံပုရာသီးတစ်လုံးလိုအပ်ပါတယ်။ ရှေးဦးစွာသံပုရာသီးကိုအရည်ညှစ်ယူပါ။၄င်းသံပုရာရည်နှင့်ဆတူပျားရည်စစ်စစ်ကိုရောပြီးသောက်သုံးပေးပါက အာရုံကြောများပြန်လည်သန်စွမ်းလာပါမည်။ တစ်နေ့တစ်ခွက် မှန်မှန်နေ့စဉ်သောက်သုံးပေးရပါမည်။ အစာမစားခင်တစ်နာရီလောက်ခြား၍သောက်သုံးပေးရပါမည်။တစ်လအတွင်းသိသာတိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ ဘာအန္တရာယ်မှမရှိပါ မြန်မာ့ဆေးနည်းကောင်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်။ ရောဂါနဲ့ဆေးတွေ့ပါစေ။ […]
ခါးနာတာ ကျောက်ကပ်ကြောင့်လား၊ အရိုး ၊အကြော ကြောင့်လား အလွယ်တကူခွဲခြားနည်း
“ခါးနာတာ” ကျောက်ကပ်ကြောင့်လား? အရိုးကြောင့်လား? ခါးနာတယ်လို့ ယေဘုယျပြောတဲ့အခါ ဘယ်ကနာလဲဆိုတာ စတင်ဆန်းစစ်ဖို့ လိုလာပါတယ်။ လူနာတစ်ယောက် ခါးတစ်ဝိုက်မှာ […]